Ukwamkelwa kweKholeji yaseManhattanville: I-SAT izikolo kunye nokunye
I-Admissions yeekholeji yaseManhattanville
Ingqwalasela yeeKholeji zaseManhattanville:
Ikholeji yaseManhattanville, ngesantya sokwamkela i-77%, ayinakukhuphisana kakhulu kwiimvume zayo. Abafundi abanomdla kufuneka batyelele iwebhusayithi yekholeji kwimimiselo yesicelo kunye nokubona ukuba isikolo siya kuba sisilungele. Ukufaka isicelo, abafundi abaza kufuna ukuba bathumele kwisicelo esigqibeleleyo, ukubhalwa kwesikolo esiphakamileyo, isicatshulwa somntu siqu, kunye neeleta ezimbini zokuncoma.
Isikolo sivavanywa-ngokuzikhethela, ngoko abafundi abafuneki ukuba bangenise izikolo ze-SAT okanye ze-ACT.
I-Manhattanville College Ukwamkelwa kweeKholeji: 77%
Ikholeji yaseManhattanville ine -admission-optional admissions
College of Manhattanville Inkcazo:
Ikholeji yaseManhattanville liziko elincinci le-liberal lobugcisa elizimeleyo elise-Purchase, eNew York. I-100-acre campurus campus yimizuzu engama-30 ukuhamba ukusuka kwiSixeko saseNew York kwaye ibonisa izixhobo ezinobungakanani bendawo kunye nobugcisa bembali kunye nokuhlelwa kwemvelo ngokukodwa okwakhiwa nguFrederick Law Olmsted. I-Manhattanville ine-faculty yomfundi / umlinganiselo we-12 ukuya kwe-1 kwaye ubukhulu bomgangatho wabafundi be-17.
Ikholeji inika i-40 ye-grade-classors kunye ne-minors kunye neeprogram ze-master degree kwizemfundo, kwishishini, kubhala ngokubhala kunye neengcali ze-liberal kunye ne-doctorate kwimfundo. Izidanga ezidlulileyo kwizifundo zokufunda ziquka ukulawula, izifundo zoqhagamshelwano, isiNgesi nembali, ngelixa uninzi lwabafundi abaphumelele ekubhaleni kwimfundo yempilo, imfundo ekhethekileyo kunye neenkqubo zemfundo yabantwana.
Abafundi bathatha inxaxheba kwimisebenzi eyahlukeneyo yee-campus, kubandakanya iiklabhu zemfundo kunye nemibutho engama-40. Amanqabana aseManhattanville ancintisana kwiNgqungquthela yeNkululeko yeNkcazo ye-NCAA ye-III kwiNgqungquthela ye-Atlantic.
Ubhaliso lwabonke: 2,834 (i-1,794 izifundo zakudala)
Ukuhlukana kwezesini: 36% Amadoda / 64% Abafazi
Isifundo kunye neMali: $ 36,920
Igumbi neBhodi: $ 14,520
Ezinye iindleko: $ 1,550
Iindleko ezipheleleyo: $ 53,790
I-Manhattanville College Financial Aid (2015 - 16):
Izibonelelo: $ 23,574
Imali: $ 8,239
I-Majors Eyaziwayo kakhulu: Ulawulo lwezoShishino, izifundo zoNxibelelwano, isiNgesi, iMali, iMbali, iMculo, i-Psychology
Ukugcinwa kwabafundi beNyaka yokuqala (abafundi bexesha elipheleleyo): 76%
Ireyithi yokudlulisa: 41%
Ireyithi yokuQiniswa kweNyaka-4: 42%
Iimidlalo Zabantu: IHockey yeHlabathi, iGalofu, iNgcahla, Umkhondo kunye neNdawo, iLacrosse, ilizwe eliphambeneyo
Imidlalo yabasetyhini: Igalofu, iLacrosse, iChola, iSoftball, iVolleyball, iHockey iHockey
Ukuba uthanda iKholeji yaseManhattanville, Unako ukungafani nalezi zikolo:
College of Mount Saint Vincent: Iprofayile
IAccbury College Admissions
I-Lane College Admissions
I-Texas A & M Yunivesithi-Kingsville Admissions
IYunivesithi yaseMinnesota - I-Morris Admissions
Iingcaphuno zikaRalph Waldo Emerson
I-Georgetown College Admissions
I-Profile epheleleyo yeChina ye-早
Impilo kunye neenzuzo zobudlelwane bokuSebenza koTantra Yoga kunye noThabano
Ithini iLivi i-Poker?
I-Greatest and Brightest Guest Stars kwi-'EE '
Ayikho i-du du pain - I-French Mistake
INgqungquthela yaseBerlin ka-1884-1885 eyahlula iAfrika
Hans Lippershey: I-Telescope kunye ne-Microscope Inventor
ULaurel Oak, umthi oqhelekileyo eNyakatho Melika
I-Turkey (Meleagris gallapavo) - Imbali Yomzi
Izilinganiso zeTire eziKhutshwe ngokukhawuleza